စကားဝှက်များသိမ်းထားဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို - WINDOWS ကို - 2019
ယနေ့, တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူလူမှုကွန်ယက်အမျိုးမျိုးအတွက်တဦးတည်းအကောင့်ထက် ပို. ရှိကြောင်းတကယ်တော့, ချက်ချင်းတမန်တို့ကိုနှင့်အမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေးထားတဲ့အဖြစ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ခေတ်သစ်အခြေအနေများအတွက်ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မတူညီသောဖြစ်ကြောင်းကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့စကားဝှက်တွေသုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့် ဤဝန်ဆောင်မှု (အသေးစိတ်: password ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်း), အထောက်အထားများ (username နဲ့ password) ၏ဘေးကင်းလုံခြုံသိုလှောင်မှုကိစ္စကိုအလွန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ passwords များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်7အစီအစဉ်များကိုအခမဲ့နှင့် paid - ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပါ။ multiplatform (Windows ကိုထောက်ခံကြောင်း, MacOS နှင့်ဘယ်နေရာကနေမဆိုသိမ်းဆည်းထားစကားဝှက်များရန်လွယ်ကူ access များအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်), လက်ရှိစျေးကွက်အပေါ်ကိုပရိုဂရမ်ဖြစ်တည်မှု (preference ကိုပထမနှစ်တွင်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့ကြသောသူတို့ထုတ်ကုန်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်) ၏ရှေ့မှောက်တွင် - ငါသည်ဤမန်နေဂျာ password များကိုရှေးခယျြပေးသောအဓိကအကြောင်းရင်းများ, ရုရှားဘာသာစကား interface ကို, သိုလှောင်မှုယုံကြည်စိတ်ချရ - ဒီ option ကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်သော်လည်း: ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှု၌ရှိကြ၏သိမ်းဆည်းထားအချက်အလက်များ၏လုံလောက်သောကာကွယ်မှုပေး။
မှတ်ချက်: စကားဝှက်မန်နေဂျာသင်သာ site ပေါ်တွင်အထောက်အထားများသိမ်းထားဖို့လိုတယ်ဆိုရင်, ဒီအဘို့အဖြစ်နိုင်နှင့်မဆိုအပိုဆောင်း software ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး - အားလုံးခေတ်သစ် browser များ built-in ပါပြီ password ကိုမန်နေဂျာကိုသင်အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကသူတို့ထုတ်ကုန်များအကြားသိုလှောငျထားနှင့်ညှိနေကြသည်တစ်အတော်လေးအန္တရာယ်ကင်း အဆိုပါ browser မှာအကောင့်တစ်ခု။ Google Chrome ကိုခုနှစ်တွင်, စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်, တစ်ဦး built-in မီးစက်ရှုပ်ထွေးသော password များသည်လည်းရှိသေး၏။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် (ငါနည်းနည်းဟောင်းခေတ်ပေါ့, ဒါပေမယ့်ဒါဟာစကားဝှက်တွေနဲ့တူထိုကဲ့သို့သောအထိခိုက်မခံအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်မှုမှကြွလာသောအခါ, ငါသည် (အခြားပစ္စည်းများမှလွှဲပြောင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ) သူတို့စာဝှက်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲမှာဒေသအလိုက်သိမ်းဆည်းထားစေခြင်းကြိုက်တတ်တဲ့, ထို browser မှာမဆို extension များမပါဘဲ ) အစဉ်မပြတ်အားနည်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ KeePass ကိုစကားဝှက်ကိုမန်နေဂျာ - ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အတူအကျော်ကြားဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတစျခုကရုရှားအတွက်ရရှိနိုင်သောဤချဉ်းကပ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
(ထိုက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ installer ကိုနှင့်အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်) ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် //keepass.info/ ထံမှ KeePass ကို Download လုပ်ပါ။
အဆိုပါဘာသာပြန်ချက်များအပိုင်း၌တူညီသော site ပေါ်တွင်, Russian သို့ဘာသာပြန်ဖိုင်ကို download လုပ်ပါဇီပ်နှင့် folder တစ်ခုဘာသာစကားများအစီအစဉ်ကကူးယူပါ။ KeePass ကိုစတင်ပါနှင့်ကြည့်ရန် Menu ထဲမှာရုရှားဘာသာစကား interface ကို select လုပ်ပါ - သို့ပြောင်းမည်ဘာသာစကားကို။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးနောက်, သင်ကစကားဝှက်အသစ်ဖိုင် (သင့်ရဲ့စကားဝှက်နဲ့ encrypt ဒေတာဘေ့စ) ကိုဖန်တီးဖို့နဲ့ဒီကအရမ်းဖိုင်ပေါ်ရှိ "မာစတာစကားဝှက်ကို" သတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Passwords များကို (သင်ထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံ databases ကိုအတူအလုပ်လုပ်နိုင်) စာဝှက်ထားတဲ့ဒေတာဘေ့စထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်, သင် KeePass ကိုနှင့်အတူမည်သည့်အခြားကိရိယာမှလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ Password ကိုသိမ်းဆည်းရေးကိရိယာ (၎င်း၏ကဏ္ဍများကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်၏) ပင်တစ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံတှငျဖှဲ့စညျး, နှင့်ရရှိနိုင်လယ်ကွင်းအရှိဆုံးမှတ်တမ်းများစကားဝှက်နဲ့ "အမည်", "password ကို", "Link ကို" နှင့်သင်ဤစကားဝှက်ကိုသက်ဆိုင်သောအရာကိုအသေးစိတျကိုဖော်ပြရန်နိုင်မည့် "မှတ်ချက်လေး" ဖြစ်ပါတယ် - အားလုံးမျှမျှတတ အဆင်ပြေပြေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့။
ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ဆော့ဖ်ဝဲသူ့ဟာသူအတွက် password ကိုမီးစက်ကိုသုံးနိုင်သည်လျှင်, ထိုမှတပါး, KeePass ကို plug-in ကို support, အရာတွေနဲ့ဥပမာ, အလိုအလျောက်ဖိုင်ရဲ့ backup လုပ်ထားမိတ္တူဖန်တီး Google Drive သို့မဟုတ် Dropbox ၏ထပ်တူမှတဆင့်စီစဉ်ပေးနှင့်ပိုပြီးနိုင်ပါသည်။
LastPass - ကို Windows, MacOS, Android နှင့် iOS အတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကောင်းလူကြိုက်အများဆုံး password ကိုမန်နေဂျာ။ တကယ်တော့ဒီအကကို browser extension ကိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်, Window ၌သင်တို့၏အထောက်အထားများ၏ cloud storage ဖြစ်ပါတယ်။ devices များအကြားထပ်တူ၏မရှိခြင်း - LastPass ၏လွတ်လပ်သောဗားရှင်းန့်အသတ်။
တိုးချဲ့မှု LastPass သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း application ကိုနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးကိုသွင်းယူပြီးနောက်, သင်ဘရောက်ဇာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့စကားဝှက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရ (အပိုဒျကို browser အခြေအနေတွင် Menu ထဲမှာထည့်ပြီး) LastPass, စကားဝှက်မျိုးဆက်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Auto-ပြည့်စုံဒေတာဖြည့်စွက်, စကားဝှက်အစွမ်းသတ္တိကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ interface ကိုရုရှားရရှိနိုင်ပါသည်။
က Chrome စတိုးကနေ Android နှင့် iOS Apps နဲ့ extension များ၏တရားဝင်စတိုးကနေ LastPass နိုင်ပါတယ် Download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။ တရားဝင် site ကို - //www.lastpass.com/ru
RoboForm - အခမဲ့အသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ passwords များကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရုရှား၌အခြားသော program တစ်ခု။ အခမဲ့ဗားရှင်း၏အဓိကန့်အသတ် - ကွဲပြားခြားနားသော device များအကြားထပ်တူ၏မရှိခြင်း။
သငျတို့သသိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက်များနှင့်အခြားဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အနေဖြင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် program တစ်ခု (protected bookmarks ကို - ပြီးတာနဲ့ Windows ကို 10, 8, သို့မဟုတ် Windows7ကို run နေတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့, Roboform (Google Chrome ကိုတစ်ခုအပေါ်ကဥပမာပုံရိပ်မှာ) ကို browser ကိုတစ်ခု extension ကိုအဖြစ်တပ်ဆင်ပြီး မှတ်စုများ, အဆက်အသွယ်များ, applications များ, ဒေတာ) ။ သငျသညျစကားဝှက်ကို browser အတွက်, နှင့်အစီအစဉ်များနှင့်သူတို့ကိုကယ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုများမဝင်သောအခါ RoboForm လည်းသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နောက်ခံဖြစ်စဉ်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
တခြားအလားတူအစီအစဉ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, RoboForm ထိုသို့သော password ကိုမီးစက်, စာရင်းစစ် (လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများ), ဒေတာဖိုင်တွဲများ၏အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နောက်ထပ် features တွေရှိပါတယ်။ Roboform တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် //www.roboform.com/ru ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ် Download
Kaspersky Password ကို Manager က
ကွန်ပျူတာနှင့်သင့် hard drive ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ encrypt လုပ်ထားဒေတာဘေ့စကနေဒေတာတွေကိုကြာတဲ့ဘရောက်ဇာကို extension ကိုအပေါ်တစ်ဦး stand-alone software ကို: သိုလှောင်စကားဝှက်တွေအတွက်အဆိုပါအစီအစဉ်ကို Kaspersky Password ကို Manager ကိုလည်းအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ကအခမဲ့နိုင်ပါတယ်သုံးပါ, ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုအရေးကြီးသောယခင်ဗားရှင်းထက်ကန့်သတ်ရန်: သင် 15 passwords များကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးအချက်အလက်များ၏အော့ဖ်လိုင်းသိုလှောင်မှုနှင့်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူနားလည်ကြလိမ့်မည်သည့်အစီအစဉ်၏တစ်ဦးအလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့အလိုလိုသိ interface ကို - ငါ့အပုဂ္ဂလဒိဋ္အမြင်အတွက်အဓိကအပေါင်း။
Program ကို features တွေပါဝင်သည်:
အဆိုပါဒေတာဘေ့စဝင်ရောက်ဖို့ authentication ကိုအမျိုးမျိုးသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်: ဘယ်လိုမာစတာစကားဝှက်ကိုသုံးစွဲဖို့နဲ့တစ်ဦးကို USB key ကိုသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများ
သည်အခြား PC များပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမခြေရာတွေကိုချန်ထား, (တစ်ဦး flash drive ကိုသို့မဟုတ်အခြားသိုလှောင်မှုစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ) ကို program ၏ portable version ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စွမ်းရည်
အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှု, လုံခြုံပုံများ, မှတ်စုများ, နှင့်အဆက်အသွယ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်။
automatic backup လုပ်ထား
အစီအစဉ်များသည်ဤလူတန်းစားများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးကိုခံထိုက်သောကိုယ်စားလှယ်, ဒါပေမယ့်: တစ်ဦးတည်းသာထောက်ခံပလက်ဖောင်း - Windows မှာ။ တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် //www.kaspersky.ru/password-manager ကနေ kaspersky Password ကို Manager ကို Download လုပ်ပါ
အခြားအလူကြိုက်များ password ကိုမန်နေဂျာများ
ရုရှားဘာသာစကား interface ကိုတစ်ဦးမရှိခြင်း, သို့မဟုတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလကျော်လွန်အခမဲ့အသုံးပြုမှု၏မဖြစ်နိုင်: စကားဝှက်များသိမ်းထားဖို့အနည်းငယ်အရည်အသွေးကိုအစီအစဉ်များ, ဒါပေမယ့်တချို့အားနည်းချက်များရှိသည် - အောက်တွင်။
1Password - ရုရှားဘာသာစကားနှင့်အတူအလွန်အသုံးပေါင်းစုံ password ကိုမန်နေဂျာပေမယ့်စမ်းသပ်ကာလပြီးနောက်အခမဲ့အသုံးပြုမှု၏မဖြစ်နိုင်။ တရားဝင်ဆိုက်ကို -//1password.com
DashLane - ထိုက်ဘ်ဆိုက်များမှ entry ကိုများအတွက်အခြားသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်စျေးဝယ်, လုံခြုံမှတ်စုများ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ထပ်တူ။ ဒါဟာဘရောက်ဇာတစ်ခု extension ကိုအဖြစ်နှင့်တစ်ဦးကို standalone လျှောက်လွှာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အခမဲ့ဗားရှင်းကိုသင် 50 password များနှင့်ထပ်တူမပါဘဲတက်သိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တရားဝင်ဆိုက်ကို -//www.dashlane.com/
RememBear - password များနှင့်အခြားအထိခိုက်မခံ data တွေကိုသိုလှောင်ဘို့ multiplatform ဖြေရှင်းချက်အလိုအလျောက်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အလားတူလုပ်ငန်းများကိုအပေါ်ပုံစံများဖြည့်ပါ။ ရုရှား interface ဘာသာစကားကိုမရရှိနိုင်ပေမယ့်အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအလွန်အဆင်ပြေသည်။ အဘယ်သူမျှမထပ်တူနှင့်အရံသိမ်းဆည်း - အခမဲ့ဗားရှင်းန့်အသတ်။ တရားဝင်ဆိုက်ကို -//www.remembear.com/
အကောင်းဆုံးအဖြစ်, SUBJECT, ငါအောက်ပါဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်:
'KeePass Password Safe, သင်အရေးကြီးသောအထောက်အထားများ၏သိုလှောင်မှုဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာအဖြစ်အလိုအလျှောက်ပုံစံဖြည့်သို့မဟုတ်သင့် browser ကနေ password များကိုကယ်တင်လိုထောက်ပံ့ပေး - မပေးသေချာပေါက်။ ဟုတ်ကဲ့မရှိသအလိုအလျောက်ထပ်တူပင်ဖြစ်သည် (သို့သော်သင်သည်ကိုယ်တိုင်ဒေတာဘေ့စရွှေ့နိုင်သည်), ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းသော်လည်း, ရှိသမျှကိုအဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်များ, crack ဖို့ password များလုံးဝနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဒေတာဘေ့စ, ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှုကထောက်ခံပေမယ့်အလွန်အဆင်ပြေစည်းရုံး။ ထိုသို့အားလုံးတာဝန်ခံနှင့်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
LastPass, 1Password နှင့် RoboForm (သောနာမည်ကျော် LastPass, RoboForm နှင့် 1Password ငါပိုပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း) ထပ်တူလိုအပ်နှငျ့သငျကပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်လျှင်။
သငျသညျ password ကိုမန်နေဂျာများအသုံးပြုပါသလား နှင့်အညီ, ဒီတော့လျှင်အဘယ်?